Fight at Dynamos supporter's burial - Soccer24
Fight at Dynamos supporter’s burial
Dynamos and Zanu PF supporters exchanged blows at the burial of fan Chipo Nyikayaramba who passed on in a road accident on Saturday.
The two sets of supporters fought over the control of the proceedings, with both claiming ownership of Nyikayaramba who was part of the Dynamos supporters executive as well as being a member of Zanu PF where she was a Chief Usher in Gweru.
Nyikayaramba was also part of the Chapungu supporters executive.
The Zanu PF group led by the Gweru urban candidate in the last elections, Esau Natare charged that the party should take control of everything which the Dynamos fans objected to arguing that Nyikayaramba died on the line of duty doing the club’s business.
Zanu PF youths then removed the Dynamos flag which was on Nyikayaramba’s coffin and put theirs which resulted in the fight. Members of the defence forces from Chapungu who were present had to calm down the situation.
Dynamos assessing Congolese
Local giants want Nkhatha
Mutuma ‘Joins’ Ferraviaro da Beira
Report: Dynamos coach gets work permit
PreviousGuardiola questions VAR decision after Man City crushes out of C.L
NextHighlanders vs Dynamos: Madinda to field strong squad